Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar zveMuvhuro
Chii Anava (Oxandrolone)?
Oxandrolone (53-39-4), inotengeswa pasi pezita rezita rokuti Oxandrin naAnavar, pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kubatsira kukurudzira kuwedzera muzviitiko zvakasiyana-siyana, kubatsira kubvisa mapuroteni catabolism anokonzerwa ne-long-term corticosteroid therapy, kutsigira kupora kubva kunopisa zvakanyanya, kurapa marwadzo emapfupa anokonzerwa ne osteoporosis, kubatsira mubatsiro revasikana vane Turner syndrome, uye nezvimwe zviratidzo. Inotorwa nemuromo.
Anavar nokuda kwekuvaka muviri
Wacherechedza here kuti nhasi mazuva ano vanhu vakawanda vanga vari mumamiriro akaipisisa vari kuwedzera simba, vanoonda uye vari nani? Mumusangano wehupfambidzani wehupfumi, inenge mifananidzo yose yakatumirwa ine miviri yakavezwa uye yakabvaruka. Kana iwe unofarira zvakanyanya pane zvinoitika, uchaziva kuti izvi zvinonzi steroid inoshandiswa. Yakava yakajairika pasi pose, uye vanhu havachafaniri kurwadziwa kuti vaite zvinangwa zvemuviri wavo.
Zvisinei, kuti uite izvi, unofanirwa kusarudza mishonga yakarurama kuti uite zvaunoda. Hapana anoda kuwana muviri wakanaka uye kufa nemigumisiro yeminiti inotevera. Uyezve, iwe unogona kuwana muviri wakanaka nhasi asi waro wose wakapinda mukati memakore maviri.
Kuti udzivise chero kuora mwoyo, iwe unofanira kutora steroid yakarongwa zvikuru inonzi Anavar. Iyo yakanaka anabolic steroid pane dzakawanda mazinga. Muchikamu chino, ini ndichakuudza zvose zvinobatsira izvozvi-iyo-yose steroid inopa.
Kana iwe uchida kuvandudza pane rwendo rwako rwekuvaka muviri, iwe unofanira kufunga kuishandisa. Kwete chete iwe uchaona kufambira mberi nokukurumidza asi iwewo uchashamiswa nemigumisiro yenguva refu. Pasinei nokuti uri kuenda kumitambo yepamitambo kana kubasa rako, iwe unogara uchinzwa seumambo, uye usambogoni kuwana zvakakwana zvemhiko kubva kune wese.
Tose tinogona kubvumirana kuti kuvaka muviri ndeimwe yekare kare maitiro anotsvaga kuvandudza kutarisa kwevanhu, kunyanya varume. Kunyange zvazvo munhu wose achirova gym nechinangwa chakasiyana chaanoda, chirevo chinowanzoitwa ndechekuti mumwe nomumwe anoda kutarisa zviri nani, kupisa mafuta akawedzerwa uye kuwedzera mamwe musuru. Kumadzimai, kudzorerwa kwekutaridzika kwechikadzi kunokwezva ndiko kutarisira kukuru shure kwekuvaka muviri. Varume vanozviita kuti vawedzere misumbu semitumbi yavo yava kutova nayo. Kune nzira dzakawanda dzekuita izvi, uye kubva kune dzimwe nzvimbo dzakawanda paIndaneti, weightlifting inouya kumusoro. Zvisinei, pane chimwe chinhu chinogadziriswa chinopindirana pamwe nekudya kwakakodzera, kuwedzera kwekusimudzira, uye kurarama kwakarongeka. Uku ndiko kushandiswa kweSteroids, uye ichi ndicho chikamu chejigsaw iyo Anavar aida kuzozadza paakaiswa pamusika. Nezvimwe mishonga yakakurumbira inoshandiswa mukudhinda nekucheka iwe unogona kureva "An In-Deep Review of Superdrol (Methasterone) yekuvaka muviri"
Anavar, uyewo anozivikanwa seOxandrolone inonzi anabolic steroid inonyatsozivikanwa nehutano uye hutano hwemagariro. Hapana munhu akakodzera kukunyengera iwe sezvo zvichionekwa seine steroid ine munyoro, haitakiti zvakawanda zvikomborero. Zvinoshamisa kuti ndiyo steroid yakanakisisa iyo varume nevakadzi vanofanira kutanga kutora nhasi.
Iyi steroid dzimwe nguva inopfupiswa se "var" uye ndeimwe yemakumbo akachengeteka steroid anowanikwa. Itsbolic yayo ye androgenic ratio ndeye 322-630: 24. The molecular weight of Anavar is 306.4442 g / ml.
Upenyu hwahwo hunoshusha huri 8-12 maawa uye hunogona kuva mumuviri kwemavhiki matatu kusvika mana. Anavar's ingredient inoshandiswa ndeye Oxandrolone apo zvisingabatsiri zvinoshandiswa zvinonzi hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, lactose, uye cornstarch.
Anavar ndiro zita rekutengeserana iro rinoshandiswa pakushambadzira chemakemikari Oxandrolone iyo inonzi anabolic androgenic steroid. Iyo kanda yakaitwa yekutanga mu1962, uye zita rekutengesa raiva Anavar. Anavar mugadziri aiva GD Searle & Co., uye ikambani yakagadzira chirwere ichi nechinangwa chekupa rubatsiro rwekurapa kune vashandi vayo. Chirwere chacho chakatengeswa nokukurumidza kusvika muna 1989 apo kuburitsa kwayo kwakanyanya kuderedzwa mushure mekunge FDA yakamanikidzwa zvikuru nekambani inotaura nezvemigumisiro yaAnavar pane anabolic steroid kune vatengi. Steroid yakaona kusakwana kwese kubva mumusika mushure meDFA yakasimbisa kuti haifaniri kubudiswa uye izvi zvakaratidza kuguma kwaAnavar steroid yaimbodiwa.
Zvisinei, muZ1995, imwe kambani yakatora kubva pane iyo GD Searle & Co. yakabva uye yakatanga kubudisa chirwere ichi kunyange pasi pezita rezita rakasiyana. Savenir Company yakagadzira Oxandrolone yekutanga asi yakaitumidza kuti Oxandrin. Iyo kambani yakawana kutengesa kukuru kwe steroid yakaropafadzwa, asi kukanganisa kwavo kukuru ndechokuti vakange vane hurumende yemusika uye saka vakatengesa iyo zvakanyanya. Savenir akanakidzwa nekutengesa mushonga kwenguva yakati isingatauri kusvikira mumwe mutambi akauya kuzoponesa varimi uye akabudiswa Anavar for sale pamutengo wakaderera. Mushonga wacho unodhura zvikuru kupfuura apo Savenir Company yakagadzirisa hurumende yekugadzira iyo, asi ichiri kudhura kune dzimwe vanabolic steroid.
Kurapwa kweHIV / AIDS
Mushure mokunge kuwanikwa AIDS mune zve1980, vatsvakurudzi vakatsunga kuziva chikonzero chechirwere. Vakatora HIV neAIDS sehosha ye autoimmune, uye sezvo yakanga isina mushonga panguva iyoyo, ivo vakasiiwa vane chisarudzo chekurapa zviratidzo. Anavar akanga ari mumwe wevanabolic steroid akashandiswa kubatsira varwere kuti vawane musimba wavo musati vasangana nekuputika. Yakavabatsirawo kuwana simba ravo uye chido.
Shingairira vanhu vakaurayiwa
Zvimwe pane kubatsira avo vane AIDS uye kuparadza zvirwere, Anavar (53-39-4) yakabatsirawo kupisa varwere kuporesa. Mune chidzidzo chakaitwa, varwere vakatambura kupfuura 40% uye vakaporesa vachishandisa Anavar, vakapora nokukurumidza uye vakawanazve musimba wavo vachibva kuchipatara nokukurumidza vachienzaniswa neaisashandisa Oxandrolone. Mushonga uyu hauna kuita kuti mumwe ave nemarwadzo makuru, uye izvi zvakaita kuti vatsvakurudzi vaone kuti yakachengeteka iyo inoshandiswa neyero yakakodzera uye pasi pesimba rinodzorwa.
Anavar akatanga kushandiswa mumunda wevatambi mukutanga kwe2000s. Yaiva panguva apo "Muscle Media 2000" bhuku rakakurumbira rakanga richikurukura steroids pachena. Anavar ainyanya kukoshesa mumagazini nekuda kwedambudziko rayo rakaderera kuti ribatsirwe. Kutevera zvinokurudzirwa, Anavar akazivikanwa zvikuru uye anoshandiswa munyika yose nekuda kwehutano hwakanyanya hwaive nawo mumuviri.
Nhasi, vanavar ndiyo inowanzobatwa vanabolic steroid pasi rose. Vatambi vanoishandisa pakutanga kwekufamba kwavo kuti vabudirire kuwana uye pamagumo ayo ekurapa maitiro. Inonyanya kuzivikanwa nehuwandu hwekudzivirira kana kuvharidzira zvichienderana nesimbi. Kunyangwe kushandiswa kwayo kungave kusingabvumirwi nemutemo mune dzimwe nzvimbo dzenyika, unoona kuti Anavar akachengeteka kana achishandiswa zvakanaka.
Iko kuchinja hupenyu nokuti yakabatsira varwere vazhinji kurapa uye kurarama zvakanaka. Inowanzoshandiswawo nevanhu vakawanda vanoda kuvandudza mafungiro avo, simba, uye simba risina kutambura zvipingamupinyi zvakanyanya izvo vamwe vanabolic steroids pose.
IOxandrolone ichiri mumusika, asi inowanzoenda nemamwe mazita emagetsi akadai seProtivar naLonavar. Migumisiro yezvigadzirwa izvi zvekare zvinenge zvakafanana neyekutanga maAnavar. To buy Anavar, iwe haufaniri, saka, shingairira zita rezita. Pane kudaro, bvunza Oxandrolone. Izvi hazvirevi kutengeswa pamusoro pekambani, uye iwe unoda chiremba kubva kune chiremba uyo achakupa iyo yaidiwa yaAravar iyo yaunoda kuti uwane zvigaro zvakanakisisa. Mushonga uyu unoramba uri we steroid inonyanya kuzivikanwa nekuda kwekunaka kwayo kune vashandi varo. Iyo yakachengeteka zvakare kuti ishandiswe nevarume nevakadzi, uye izvi zvinoita kuti chive chisarudzo chepamusoro kune vakawanda. Kunzwisisa kushanda kwemishonga iyi, zvisinei, zvakakosha sezvo ichiri chirwere pasinei nokuti ine madhara.
Mhando dzakasiyana dzeAnavar
Hatigoni kukanganwa kuti Anavar anouya nenzira dzakasiyana-siyana paunenge uchida. Kubva pamvura, mapiritsi, unogona kutenga izvo zvakanyanyisa kuti iwe ushandise. Iyo mvura haina kureva injectable Anavar; iyo kuregererwa kunotorwa mumuromo kuti inononoka kudya.
Anavavarwi inowanzove, uye zvose zvaunofanira kuzviita zvinozviyera kuti uone kuti uri kutora chikero chakakodzera chacho ndokuchiisa mumuromo mako ndokumedza. Chinonyanya kukosha chacho ndeche Oxandrolone. Iwe unogona kushandisa zvakare Anavar kuti aite ma capsules ako zvichienderana nemutero wakapiwa.
Chinhu chakanaka pamusoro pokumedza mapiritsi ndechekuti haisi kunetseka uye iwe unogona kuzviputira chero kupi zvako kana uchigara pasi kana netsoka dzako.
Anavar Anoshanda sei?
Panguva yekugadzira Anavar, dehydroepiandrosterone inoshandiswa. Iyo inobva kune uye iine molecularly yakafanana ne dihydrotestosterone saka muviri unoitora iwo nenzira imwechete iyo inobata iyo androgen hormone.
Kana ukangomedza Anavar, muviri unoita nenzira imwechete iyo inoita kamwechete kana uwandu hwe testosterone hukwira. Somugumisiro, kune kuwedzerwa kwesimba rako, simba uye musimba mashoma. Uyewo, inobatsira muviri wako kupisa mafuta akawanda sezvo zvichivandudza muviri wemetabolism.
The Anavar steroid inoshandura muviri wako pachayo. Zvisinei, kusungira nzira yaunoda kutora mamwe mapuroteni uye kushanda kunze. Mumuviri wako unowedzera vanabolic nekuita mamwe mabasa epanyama.
Mune mamwe mazwi, muviri wako unowedzera simba uye simba rakakosha panguva yekushanda. Icho, saka, inopindura nekukurumidza kuburikidza nekukura kwemakumbo uye makukuro makuru sezvo inoderedza mafuta akawanda mumuviri wako. Anavar anopa imwe simba zvakare kuti asungirire zvirongwa zvevanabolic izvo zvinotora mafuta zvinodzinga imwe nematumbo akaoma. Iwe uchacherechedza kuti ani zvake akashandisa Anavar (53-39-4) anowana zvakawanda zvingorumbidzwa nekuda kwechimiro chavo chemaonda chisingaoneki nyore nyore.
Anavar is steroid, uye steroid dzakawanda dzinoshanda nenzira yakadaro pamuviri. Pane zvinhu zviviri zvinokosha kutarisa paunofunga nezvekusarudza steroid yekuita. Ikoko kune vanabolic uye zvinonzi androgenic. Semuenzaniso, munhu anoda kuwedzera uwandu hwemisungo yavo uye kudzinga mafuta mumuviri anofanira kutora steroid ane vanabolic zvinokwidza zvigaro zve androgenic. Mumashoko akajeka, anbolic steroid yakadai saAnavar inoshanda nenzira dzinotevera:
Boost proteins synthesis. Zvine mapuroteni akawanda, musimba wemuviri unowedzera, uye nokuda kwevarume, masimba anotanga kukura.
Chimwe chibereko chevanabolic chikwata chekudya. Steroid inokonzera protein synthesis, uye muviri saka unoda huwandu hwemasimba kuti uite izvi. Nokudaro, kuda kuwedzera kwekudya kunotarisirwa, asi hazvisi chinhu chisina kunaka sezvo zvokudya zvichabatsira zvikuru muviri.
Itero steroid inokurudzirawo kupatsanurwa kwemashoko matsvuku eucocytes. Uturu hwomuviri huri kuwedzera nokukurumidza, uye ivo, saka, vanoda huwandu hweokisijeni. Izvi zvinokonzera muviri kuti ubudise masero matsvuku eropa kuti azadzise kukwana. Mhedziso yeiyi inovandudzwa musimba kutsungirira. Mimwe mishonga inotaurawo kuti Anavar (53-39-4) inobatsira mukugadzirisa utano hwemwoyo.
Anavar anonyanya kufananidzwa seimwe yezvishoma steroid iyo inobatsira kupisa mafuta emuviri. Mamwe vanabolic steroid anozivikanwa kuva nehutano hwakasiyana hunoita kuti uwedzere kushandiswa kwemagetsi, uye izvi zvinokonzera kurasikirwa kwemafuta emuviri. Zvisinei, nokuda kweAnavar, iyi imwe nzira yekuwana mhinduro dzakanaka kuburikidza nekubatanidzwa zvakananga mukusimudzira kupora. Iyo hormone inoita izvi nokuzvibatanidza zvakananga kune iyo androgen receptor
Mafupa anozovandudzawo sezvo kugoverwa kwe okisijeni kumisungo kuwedzerwa.
Anavar anozadzisa zvese zvakanyorwa pamusoro apa nemigumisiro yakaipa kumushandisi. Zvisinei, hapana mushonga, kunyanya steroid, inogona kuonekwa seine mitezo yakanaka chete. Apo iwe tora Anavar, unotarisira kunzwa mamwe maitiro uyerogenic anowanikwa nekushandiswa kwe steroids. Zvisinei, chinhu chakanaka pamusoro pemishonga ndeyokuti migumisiro ye androgenic yakave ichiziva. Izvi uyerogenic zvinokonzera steroid dzinosanganisira:
Kuwedzeredza zvakanyanya testosterone hormone. Ichi ndicho chiitiko chinowanzoshandiswa chekushandisa steroid kune varume, uye kazhinji inotungamirira kumvhu kuwa.
Ikoko kunogona kuitika nekushandiswa kwe-steroid, uye muviri unogona kubereka pasi ye testosterone. Izvi zvingangodaro zvinokonzera kushandiswa kwepabonde kwevashandi.
Basa rakawedzerwa rezvigunwe zvemuviri zvakanyarara. Izvo zvinokonzera kusungirirwa kunotungamirira kumeso emuviri kumumuviri.
Izvi uye androgenic zvinokonzerwa nemunhu ari kushandisa steroids. Zvisinei, zviwanikwa zveAnavar zviri kure nemararamiro anowanzoitwa steroids. Chikonzero nei Anavar bodybuilding iyo inofanirwa ndeyekuti mishonga yakagadzirwa kuti iwane kukwana kwakakwana pakati pevanabolic uye ne androgenic nemigumisiro. Izvozvo zvinokonzerwa nevanabolic zvakanyanya zvikuru kupfuura zvekuti androgenic hadzina kumboziva. Anavar nokuda kwevakadzi ikozvino yakachengeteka kushandiswa nekuda kwezvikamu zvayo zvishoma uye uyerogenic. Saka, paunenge uchifamba neAnavar urongwa hwako unotarisira kuve nekushandurwa kwepamusoro mumuviri wako izvo zvinogona kunge dzimwe nguva zvichienderana nemigumisiro yakaoma.
Mishonga iyi ine kukodzera kwakakwana kwezvinhu izvi zvakanyanyisa iyo inofungidzirwa kuti inokonzera basa remuviri rakasimbiswa kupfuura testosterone chaiyo. Semuenzaniso, testosterone's anabolic rating iri pa 200 apo zvinonzi androgenic zvakarongwa pa 100. Zvisinei, Deca-Durabolin iyo steroid inenge iri pasi pfupi naAnavar inotarisana ne125 muanabolic muchengeti uye pasi pe37 padhesiro. Kunyange zvazvo basa re Anavar hormone iri munyoro pamusoro, inonyanya kuwanda uye inogona kuvandudza kushanda kwemuviri katatu kupfuura testosterone chaiyo. Izvi zvinonzwika sekuti chiito chechirwere chinogona kutungamirira kuhutu hunouraya kumunhu, asi handizvo.
Chii chinokonzera Anavar kubatsira zvikuru ichocho;
Inowedzera huwandu hwePhosphocreatine- Izvi zvinobatsira muviri kuti upise mafuta akawanda kubudirira.
Inowedzera nitrogen kuchengetedza- Isu tose tinoziva kuti mapuroteni anokosha kana achiuya ekurasikirwa kwemafuta uye simba. Nitrogen ipuroteni chivakwa, uye kuvapo kweine nitrogen zvinoreva kuti pane puroteni iri nani yekuti ikozvino kukurumidza kurasikirwa kwemafuta.
Anavar bhazipi uye stacking
Chinangwa chikuru chekushandisa Anavar kuwedzera simba uye kurema. Uyezve, inoshandiswa kupisa mafuta akawanda mumuviri. Anavar ikozvino inoshandiswa zvikuru nevaya vanotarisa kuti vave nematomu akawanda uye vanoda kuwedzera simba. Izvo zvinoita kuti zvive zvakakwana se "Cutting steroid."
Kuvhara Anavar ndiyo chiito umo munhu anoshandisa steroid pamwe nemamwe steroid kuti agone kuwana chiitiko chinotarisirwa. Varume nevakadzi vose vanogona kuvhara kuti vacheke kana vakawanda. Nguva yakawanda nguva varume vanowedzera munguva yavo yekucheka nguva yekuderedza mafuta avo mumuviri.
Ngarava inotsanangurwa seyo nguva iyo munhu anotora steroid chaiyo kwechinguva ndokubva amisa iyo ichibvumira muviri kurara kwechinguva. Kuringirika kunotsigira pane zvaunofarira zvemuumbi wemiti. Uyewo, mabhasikoro evakadzi akasiyana neaya evanhu. Mukadzi anogona kungotarisana kwemavhiki masere apo murume anokwanisa kutenderera kwevhiki dzinopfuura masere. Kusiyana nedzimwe steroid mumusika, iyo isiri nguva yekushandisa Anavar (53-39-4) yakapfupika sezvo inongotora mavhiki matatu kusvika mana kune vose vakadzi nevarume vomuviri.
Chii Anavar Achiita Zvechokwadi?
Anavar akagadzirirwa kuunza zvinotevera zvinobatsira uye kuguma kwemigumisiro kumushandisi:
Kuwedzera kwehuwandu hwemisumbu.
Anavar steroid inoburitsa bulking mukati mutsva pfupi pfupi yekushandiswa kwayo. Oxandrolone haisi inowanzogadzira chikamu chinonhuwira. Nokudaro, kana ichipedza, iyo yakawanda inorema inoshandurwa kuva yakaonda musimba. Izvi zvinoreva kuti kunogona kunge kusina mvura yakachengetwa mumisungo apo uchishandisa Anavar. Iyo hormone inoshanda nenzira yakasiyana kune mamwe masimba ekuumba steroid akadai saAnadrol uye panzvimbo pacho inoumba mishonga yakaonda. Kubudirira kweizvi ndechokuti mashoma akawanikwa paanenge achishandisa Anavar ari nyore kuchengetedza kupfuura izvo zvinowanikwa kuburikidza nekushandiswa kwemamwe makuru ekuumba steroids. Saka zvakakodzera kune vanhu vanoda kuda kuteura mafuta uye panguva imwechete vanochengetedza maitiro akaoma.
Mumitambo yakawanda, muviri mukuru wevanhu unogona kuratidza kuti inopesana nebasa romumwe munhu. Ndicho chikonzero nei Anavar anowanzogamuchirwa se steroid yekubatsira nevatambi vakawanda sezvo inobatsira kuvandudza miviri yavo panguva imwe chete ichichengetedza muviri unoda. Kunyange zvazvo Anavar asina simba seimwe simba rekupa steroid dzakadai seHalotestin uye Dianabol, zvichiri kubatsira mukupa vatambi simba. Simba rinobatana ne-steroid rinogamuchirwa sezvo rinotungamirira kukuvandudza nekukurumidza uye simba panguva yekuita basa. Iyo mishonga inokonzera kusachengetwa kwemvura zvishoma sokudaro mutambi wacho haaisi pangozi kuwana kuvhara mumashandisirwo ekushandiswa. Zvose zvaunofanira kuziva nezveProviron yekuvaka muviri
Anavar kushandisa kunotungamirira mukuvandudzika kwemitsipa yekutsungirira. Misumbu icharamba ichitsvaira kwenguva yakareba, uye naizvozvo munhu haazononoka nokukurumidza. Izvi zvinoita kuti steroid ive yakakodzera yemishonga inoshandiswa nevatambi vanoda kuwedzera zvibereko zvavo mukurovedza. Anavar anoita izvi zvose paanenge achivandudza dzimwe nzvimbo dzomuviri wako zvichiita kuti ive imwe yeiyo inoshanda uye ine ushamwari steroid yemazuva ano. The Ultimate Guide to Methyltestosterone for Bodybuilding
Kwete aromatizing madhara
Aromatization ndiyo kutendeuka kweestrogen. Sezvo Oxandrolone isingabvumi, avo vanoishandisa havatarisiri kutambura chero zvipi zvayo zvinokonzerwa neesrogen, kureva, kuchengetedza mvura uye gynecomastia. Chinhu chikuru pane izvi ndechokuti iwe unogona kufara zvose zvinobatsira izvo Anavar anopa kunze kwekutsvaga bhoi guru shure.
Anavar akakunda mwoyo yevakawanda nekuda kwezvikomborero zvenguva refu inopa. Kurasikirwa kunoshamisa kwemafuta uye kuonda kwemasumbu kunowanikwa mushure mekushandisa izvi zvinodhaka zvinodhaka hazvisi kuzonyangarika pashure penguva pfupi. Kana iwe uchiita fantastic post-cycle therapy, iwe unogona kunge uchinakidzwa nezvikomborero kwenguva yakareba seyakaita. NaAnavar, iwe uchava nemari yakawanda yakachengetedzwa yakaenzaniswa nedzimwe steroid.
Kana iri steroid yemuromo, ichi chinodhaka hachikuiti kuti uwedzere migumisiro iyo ichakusiya iwe wakasimbiswa. Kushandisa kwaAnavar hakuzokuvadzi chiropa chako kana kuchinja ropa rako mukati chero ipi zvayo.
Iwe uchaputsa nepasipasi
Yakambosvika pane imwe nzvimbo apo mishonga yako isingaoneki kuoma kana kuwedzera mamwe mapaundi? Oxandrolone achadzorera iyo kuburikidza nekukupa iwe kukuwedzera kumwe. Kana iwe wakanga uri muimba yekurovedza kubva panguva yekare uye usati wasvika pane chinangwa chako, iwe unofanira kufungidzira kushandisa Anavar.
Anavar results havatungamiri pakuvakwa kwevakawanda kwakaunzwa nekuchengetwa kwemvura. Kuwana kwaro kunopera zvishoma kana kuchienzaniswa nezvimwe zvinonzi steroid. Neizvi, unogona kuva nechokwadi chokuti uremu hahuzoperi kunyange mushure mekunge waitwa nehupenyu nekuda kwekuchengetwa kwemvura.
Uyu mushonga unobatsira zvikuru unobatsira mararamiro aunowana kubva pane zvaunodya uye kuburikidza nekudzora makori ako. Somugumisiro, kudya kwakachena pamwechete nekushandiswa kwaAnavar kuchakubatsira kuwana mutumbi waunoda.
Iwe uchacherechedza kuti kana wapedza nekufamba kwako, iwe uchave wakagadzirisa chimiro chechirume icho chakaoma kwazvo. Iyo kuoma ndeyekuti mishonga yakagadzirwa haisi yepamusana pokuchengetedza kwemvura.
Iwe haufaniri kugara kwemakore kuti uone zvakawanikwa naAnavar. Hapana chido chekuti! Kusiyana neserodi dzakawanda, ichi chinodhaka chichakupa mhinduro mukati memavhiki maviri ekutanga. Unobatanidza nekurovedza, unoona kuitika kwevhiki.
Iwe uchakoshesa chokwadi chokuti Anavar is steroid inokurumidza-kuita zvinobudirira zvikuru paunotanga kufamba kwako. Vakawanda vomuviri vanofarira kuita izvi kuitira kuti vagozokwanisa kukurumidza kusimba musumu uye simba rinowanikwa. Kana iwe unogonawo kufambisa mararamiro ako nenzira yakanakisisa yakakwanisika Anavar ndiye chiitiko chaicho.
Iwe uchada mitsva iyo Oxandrolone inokupa iwe paunenge uchitaura iyo pakuguma kwekufamba. Paunoshandiswa kupedzisa mhirizhonga, Anavar achakupa hupenyu hwako hwakanaka uye zvaunowana.
Migumisiro yakaisvonaka inowanikwa kuburikidza nemhando dzakasiyana
Anavar inowanikwa nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira mapiritsi uye mafomu emvura. Iwe unogona, saka, kutenga, chii chinokufananidza iwe. Iwe haufaniri kukundikana kutora Anavar nokuti iwe unovenga ruzivo rwemafuta Anavar. Iwe unogona kugara uchingoronga mapiritsi uye unovatora zviri nyore.
Inokurudzira mutambo unoita kuti vakadzi vabatsirwe
Uri kutarisa kuva nesimba rakawedzerwa semutambi here? Hapana dambudziko. Anavar inonyanya kukosha kune vatambi vechikadzi vari kutsvaga muganhu. Chii chinowedzera kuti icho chinokupa musimba kuwana uye simba rinoshamisa.
Vakadzi havadi rubatsiro kana PCT
TheAnavar inonakidzwa nevakadzi nokuti haifaniri kutenga ancillaries sevanhu. Chimwe chinhu ndechokuti haafaniri kushanda chero kurapwa mushure mekufamba. Chinhu chimwe chete chavanoda kuita ndechekuti ivo vanopedzisira vafa uye vanodya vakachena kwemavhiki maviri mushure mekufamba. Kubudirira kwekuita izvi ndechokuti kunoderedza kushamiswa kwemuviri mushure mokubva kushandiswa kwaAnavar.
Vakadzi vanowana kunyange pamutengo wepasi
Vakadzi havazombotambudzi kuti vatange kuona zvigumisiro. Ingano duku duku pakati pe5mg-10 mg uye iwe wakanaka kuenda. Izvo zvinoita kuti kuwedzerwa kwemisungo nyore nyore pachikwama sezvo iwe usingashandisi zvakawanda zvechigadzirwa.
Kuva nemapfupa ari nani ndizvo izvo vanhu vakawanda vanoda kuziva. Chimwe chezvinhu zvinonakidza nezvaAnavar ndezvekuti kana ukasarudza kuishandisa, iwe uchaona kuti mazino ako nemapfupa zvinowedzera. Hazvishamisi kuti yakashandiswa kurapa osteoporosis munguva yakapfuura.
Inokonzera kuderera HPTA kuderedza
Kusiyana nedzimwe steroids, Anavar inobatsira pakuderedza kweHypothalamic-Pituitary-Testicular Axis (HPTA). Icho chinoreva kuti kukosha kwako kwe testosterone kunoramba kwakasimba.
Mushonga uyu uripo mumuviri wako kwenguva pfupi
Kuva nemaawa masere hafu yenguva, Anavar ndiye chete steroid inogara mumuviri wako kwenguva pfupi. Izvozvo zvinoreva kuti iwe unokwanisa kutora iyo 2-3 nguva pazuva nokuti haigari mumutemo wako kwenguva yakareba.
Ichawedzera simba rako nesimba zvikuru
Anavar mapiritsi ave akaratidza kuwedzera kukura kwemasimba pakati pevanhu vakawanda. Unoda humwe uchapupu here? Chidzidzo chegumi nembiri-chevhiki chakaratidza kuti kunyange varume vakura vanotora Anavar ruzivo rwakawedzerwa simba uye vanowana pane yavo yekudhonza-pasi, mutsara wemakumbo, uye chepfu chekuita maitiro.
Mano ekudzoka kubva kubasa nekukurumidza
Iwe zvino unogona kushanda zuva rega rega revhiki pasinei nekutambura kuneta. NaAnavar, haufaniri kurega kupera basa guru. Hakusi kungokupa simba rakawanda rokudzidzisa zvikamu zvako zvemuviri wako asi richakubatsirawo kuti udzoke nokukurumidza. Iwe zvino unokwanisa kupedza yako gym sessions pamwe chete nyore.
Inoderedza mafuta emimba
Uri kurwisana nemamwe mafuta emuviri here? Iwe hausisina hanya kunetseka nokuti Anavar achakupa iyo yakagadzikana tummy yawakagara uchida. Uye kuti zviite kuti zviwedzere kufadza, chidzidzo chakaitwa mu1995 chakaratidza kuti Anavar inobatsira pakupisa mafuta e-visceral muvarume vane pasi-testosterone.
Inoshandiswa paunenge uchikomberedza maitiro
Kusatora nguva yakakwana kurega zvinodhaka kunogona kuita kuti HPTA yako isabatsire. Zvisinei, Anavar achapa muviri wako kuparara kubva kune androgenic mishonga ichiita kuti uve sarudzo yakanakisisa yevashandi vemiviri vanofarira kugadzirisa.
Your cardio workout haigoni kuitika
Kushandisa kwaAnavar hakuzogadziri kukwanisa kwako cardio. Kusiyana nedzimwe steroid, iyi inokubvumira kuita cardio yako workout sezvaunoda.
Dzimwe nguva unganzwa sokuti kuwana kwako kunonoka uye funga kuisa zvirongwa zvako zvekugadzirira kusvika pakuguma. Zvinonzwisisika! Kana iwe uchida kukanganisa zvidzidzo zvako zvino kutora Anavar unofanira kuva chinhu chekutanga chaunofunga kuti uomesa mhinduro dzako.
Ita kuti zvirwere zvizivikanwe
Anavar achakupa misumbu inonyatsotsanangurwa. Uyezve, mavara acho achacheneswa nokuti hapana mvura inogadziriswa. Kune vakomana vakawana hukuru asi vanoda kutaridzirwa zvakanyanya, Anavar achakuitira basa.
Anavar mapiritsi anobatsira kukuvara uye maronda anoporesa katatu zvakakurumidza kufanana nekusaishandisa. Vanachiremba vakawanda vakaraira kuti ishandiswe pamwe chete nemajekiseni e-cortisone mukurapa mavanga.
Nevatambi uye vanhu vanobatanidzwa mune zvemitambo vachitsvaga kuti vawedzere kuwedzera, Anavar anouya mune zvigadziri sezvo inowedzera pamusana wekuita kusina kuwedzera kuwanda.
Zviri nani kuporesa basa
Anavar anoshanda kune varwere vanotambura ne tetraplegia chirwere chinokonzera kuora mwoyo kunokonzera kusakwana kwakakwana kana kusakwanisa kushandisa muviri nemakumbo. Inobatsira kuderedza kufema. Nekushandisa steroid iyi, vatambi vanogona kukwanisa kutsungirira marefu akareba uye vanovandudza kupora kwavo basa.
Pamberi uye Pakupedzisira Anavar Migumisiro
Migumisiro yaAnavar kare uye shure inotsanangurwa. Kunyange zvazvo iri, pasina mubvunzo, sarudzo yepamusoro kune vatambi vakawanda nekuda kwezvipo zvayo zvakawanda, inewo zvimwe zvikanganiso kunyange zvisingambozivikanwi. Apo steroid inoshandiswa zvine mwero maererano nemirairo yechiremba, mishonga ine zero migumisiro. Zvizhinji zvezvinhu izvo vanhu vakawanda vanotya kuzvinzwa mushure mokutora steroid hazvipupurirani nekushandiswa kwaAnavar. Izvi zvinotevera mamwe emigumisiro inosanganiswa nesteroid:
The Anavar steroid harbors ne estrogenic side effect. Izvi zvinonyanya kubva pamusana pokushaya kwayo kuumba chikamu chinonhuwira chinosanganiswa nekuumbwa kwemvura. Sezvo zvakadaro, kutora Anavar, haunzwisisi gynecomastia. Zvichipa kuti pane zero mukana wekuchengetedza mvura, Anavar anoshandisa haisi kutungamirira kukakwiridza kweropa. Ichi chinetso chinouraya chinogona kukonzerwa nemuviri une zvizhinji zvakachengetwa zvekuchengetwa kwemvura.
Anavar haasi iyo inonzi steroid ine mikana yakawanda yekukurudzira uyerogenic activity, asi mikana yekuitika ikoko ichiri kugoneka. Muchiitiko chisingawanzoitiki, Anavar anogona kukonzera kusuruvara kwevhudzi uye kukura kwezvinyama. Madzimai, hormone inogona kukonzera bvudzi kukura munzvimbo dzisina ruvhudzi. Izvi zvinotarisirwa kuitika munguva shoma shoma sezvo simba re androgenic raAnavar rakaderera. Paunenge uchishandisa dzimwe vanabolic steroids, 5-alpha reductase inoshandiswa kuderedza kusangana kwe androgenic madhara kumunhu. Zvisinei, pavanenge vachishandisa Anavar, hapana kushandisa kwekushandisa mutengesi kuderedza saAnavar zvatove zvaderedzwa.
Madzimai, zvinonzi androgenic zvinogona kuwedzerwa kana zvikaitika kuti zviitike. Chimwe chikuru chinotarisirwa neAnavar yechirungu ndeye zviratidzo zvekurima. Izvi zvinosanganisira kushanduka kwakafanana nekudzika kwezwi uye kuwedzera kwekukura kwechikamu. Zvisinei, mukana wekuitika uri pasi uye kana uripo, unogona kukurumidza kuvhara kuburikidza nekubvisa kushandiswa kwemishonga. Zvinokurudzirwa kuti usateerere migumisiro ye steroid iyi zvipo kunyanya virilization sezvavanogona kutendeukira kusingaperi.
Iyi inzvimbo inonyanya kunetseka kana iri kuuya kushandiswa kwaAnavar. Hemoni inozivikanwa kuti inokonzera cholesterol. Kana kutorwa, mazinga eHDL Cholesterol anowedzera kuderera apo avo veLDL Cholesterol vanoonekwa kuwedzera. Iko kuchinja kunokosha uye saka, kunofanirwa, kuve kwakatorwa kunofungidzirwa sezvo mumwe achisarudza kushandisa Anavar. Nzira yekuchengetedza inofanira kufungidzirwa kune avo vanotambura nehutachiona hwehushani. Havafaniri kushandisa Anavar steroid pasi pemamiriro ose ezvinhu. Kune avo vane utano hwakanaka kubva kuhutachiona hwehutachiona, kuchengetedza kudya kwakanaka chinhu chinokosha pakuita kuti zvinhu zvigare zvakarongeka mushure mekushandisa kwaAnavar.
Uyezve, zvakakosha kuti Anavar ashandise kuderedza kushandiswa kwemafuta akazara pamwe neshuga. Kuongorora pahuwandu hwehutano hwehuviri hwehutano hwemuviri uyewo chiitiko chakakosha chekugara usina rusununguko rwezvinetso zvakabatanidzwa. Kuita mabasa anorehwa kushandura mhepo yehutano ndiyo nzira inobatsira yekugara uine utano paunenge uchishandisa Anavar.
Vazhinji vana vanabolic steroids vanosangana nekuchinja kwemashoko e testosterone. Zvizhinji zvezvinodhaka izvi zvinowanzogadzirisa kukanganisa kwehomoni. Chiyero chekudzvinyirira chinokasiyana kubva kune imwe steroid kune imwe uye Anavar akachengetedza kupfuura mazhinji ezvimwe zviri mberi. Zvisinei, paunotora Anavar, zvakakosha kuongorora kushandisa imwe testosterone inokonzera mahomoni. Iyi inongova nzira yekuchengeteka yekuvimbisa kuti munhu anoramba akasununguka kubva pamagariro asina kukwana ehomoni mumuviri. Zvisinei, kuderera mumatunhu akasiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe. Kune vamwe, kushandiswa kwaAnavar kunokonzera dheta ye50% yezvikamu zvetestrotone zvachose. Ihafu yakasara ichiri pamakwikwi akanaka uye saka inofanira kukonzera imwe isina aramu.
Nguva dzose kubudiswa kwe testosterone kunotanga kushandiswa kweAnavar kwakamira. Zvisinei, zvinokosha kuti uve nemoyo murefu sekudzoka kunogona kutora nguva yakareba kusvikira steroid yese yakabviswa kubva mumuviri. Iyo nzira inogona kukurumidza kuburikidza nekuita kurapwa kwemashure maitiro iyo ndiyo nzira inobatsira kuti muviri uonekwe kubva kuna Anavar avo varipo.
Zvose C17-aa anabolic steroid inozivikanwa kuti inokonzera kutyisa kuchiropa. Anavar ari mumwe wavo haasi iyeye asi kunyange zvakadaro. Kuenderera mberi kwayo kushandiswa kunoita kuti kuve nekukwira mumazinga emuviri wechiropa. Izvi, zvisinei, zvinoitika apo mushonga unoshandiswa ndeyepamusoro. Zvirwere zvekurapa zvakawanikwa zvakakonzera chiropa asi kusvika pamaminiti mashoma. Chinhu chinokosha ndechokuti kunyange zvazvo enzyme ichizivikanwa kuti inokonzera kuwedzera kwechiropa chekunyengedzera kwechiropa, izvi hazvirevi kuti zvinoshandiswa pakuvhiringidza kwechirongwa. Izvo zvinonzi steroid ndeyekuita kudzvinyirira kuchiropa, uye izvi zvinogona kukonzera kukuvadzwa kwenguva refu kana isingatariswi nekukurumidza zvakakwana. Zvinotevera ndezvimwe zvezvinodzivirira izvo munhu anofanira kuita kudzivirira zvinetso zvechiropa pakushandiswa kwaAnavar:
Munhu anoziva chinetso cheropa, anofanira kudzivisa kushandisa kwaAnavar zvachose kana kuti chero imwe C17-aa anabolic steroid.
Doro inozivikanwa kuti inotora basa rinokosha mukukura kwechiropa chinonzi cirrhosis. Nokudaro kubatanidza kutora doro neAnavar kana imwe C17-aa anabolic steroid inogona kukanganisa utengi hwehutengi.
Chimwe chikonzero chakakosha ndechokushandisa Anavar kwemashure masere masere masere mushure mekunge iwe unofanirwa kuongororwa kuti uone kuti chiropa chechiropa chekuropa chinodzokera kune chakanaka.
Mumwe anofanirwawo kufunga nezvekushandisa detoxifier sezvavanopfuurira kushandiswa kwaAnavar kusunungura mutoro wekudzinga marara kubva pachiropa.
Anavar anopa iwe kurasikirwa kukuru kwemafuta nekuwedzera simba. Munhu wose achakurumbidza iwe uchichitevera muviri wakabvamburwa, wakajeka uye wakasimba iwe waunokura. Kuva steroid anabolic, inowedzera pamutsipa wako usina kukupa mamwe mapaundi.
Zvisinei, kusika muviri wako wehurota, iwe unofanirwa kunge wakanyatsonaka pane kudya kwakachena uye chitima panguva imwe chete. Hezvino izvo zvaunogona kuwana;
Zvigumisiro mushure mevhiki yekutanga- Iwe ucharasikirwa chero upi hwemvura husingadikanwi panguva ino. Kunyange zviri nani, iwe uchaona kuti iwe zvino unonzwa uye unotarisa zviri nani. Uyezve, iwe unonzwa uwedzerwa simba.
Zvigumisiro mushure mevhiki yechipiri- Nhasi ikozvino watoona kuti iwe warasikirwa nemafuta akawanda uye abs ari kukura. Simba rako rinobudirira rinorumbidzwa, uye masimba ako ari kuwedzera.
Mhinduro pashure pemavhiki mana-Zvichida wakacherechedza kuti muviri wako wakasimba uye wakabvaruka. Mukati pemwedzi wekudzidzira zvakaoma uye kudya, iwe zvino unokwanisa kusimudza zviremera zvakaremeka zvawafunga kuti iwe ungambosimudza. Zvose izvi ndezvikonzero zvekuwana simba kana uchipisa mafuta panguva imwe chete.
Mhinduro pashure pemavhiki masere-ndinoziva kuti haugoni kuwana zvakakwana zvezvioni zvino. Zvimwe zvakabvarurwa, masimba akasimba uye akaoma zvino zvinoonekwa. Munhu wose haagoni kukubvisa maziso.
Izvi zvinowanzoitika kune munhu aive akakurumbira uye aive neruzivo rwakanaka nezvekudya uye kudzidzisa asi aida kungoita zvishoma. Kana ukasajaira kudya uye kuita zvekurovedza muviri, unogona kuwana zvishoma nezvishoma.
Kune vanhu vakawandisa uye vakawandisa, kurasikirwa nehuwandu huremu huchava nyore kwazvo, asi haukwanise kubvarurwa mukati mwedzi nehafu chete. Kuti uite izvo zvaunoda kuzvipa pfupi pevhiki 20-25.
Steroid inonyanya kukurudzirwa kuvakadzi, asi varume vanogona kuishandisa kuti vawane maziso emhepo uye varasikirwa nemafuta. Zvinokosha kuti uishandise pamwe chete nedzimwe nzira dzekugadzira zvigadzirwa zvepamusoro kuti uone kuti zvakakwana sei. Nokuda kwekubvongodza, steroid haina kunyatsobudirira sezvo kushandiswa kwayo hakuiti kuumbwa kwematumbo akawanda sezvimwe steroid. Zvisinei, izvi zvinouita sarudzo yakasarudzwa kune vatambi vechidiki vanoda kuvaka miviri yakagwinya isiri iyo yakawanda. Nguva yakasara yokuti steroid ishoma, uye izvi zvinogona kuratidza kubatsira kune vavanakomana vasingatsvaki kuedza kune steroids vanoshandisa.
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti nei vakadzi vari kuchena kwemitumbi yepasi pose. Chakavanzika chiduku ndechokuti vazhinji vavo vari kuAnavar. Kunyange zvazvo vakadzi vangave vasina kurasikirwa nemafuta akawanda sezvinoita varume, inovabatsira kuti vatsvake nzira yekurasikirwa mafuta. Inowanzozonzi 'musikana steroid.'
Zvimwe pane izvozvo, zvinosimbisa misungo kuti ipe iyo yakasimba, kutarisa. Iwe uchatora kuti Anavar anoita izvi zvose kuvakadzi vane madhora mashoma. Kana ukarongeka neurongwa hwekuita zvekuita uye chirongwa chakachena kunobatsira vakadzi kubudirira nokukurumidza nemigumisiro yakaisvonaka.
Kurasika kunogona kuitika kazhinji, saka vakadzi vanorayirwa kubhadhara zvikuru miviri yavo panguva yekutarisa steroid. Chimwe chinhu chinoshamisa pano! Anavar haisi kukonzera kupisa, uye haufaniri kuwana majekiseni. Iyi steroid yakasimba-inobudirira ichavhenekera hupenyu hwako semukadzi nekukupa icho chimiro chakaonda uye chine simba iwe wave uchirota kuva nacho.
Anavar tsika yakagadzirirwa kubatsira vakadzi kuchengetedza zvakakodzera. Kunyange zvazvo kushandiswa kwe steroid muvarume kwakagadzirirwa kusimbisa kukura kwehutano hwemaviri akave akaumbwa, kushandiswa kwavo nevakadzi kwakagadzirirwa kuita basa rakasiyana. Mitumbi yevakadzi inoumbwa nemafuta uye zvishoma. Nokudaro, miviri yavo inoda steroid ine unyoro iyo inopisa mafuta akawandisa panguva imwe chete ichichengetedza kutarisa kwevakadzi. Ichi ndicho chikonzero Anavar ari nani pakupa madzimai aanoda kukumbira. Uyezve, steroid inotungamirira pakuumbwa kwemisungo, uye izvi zvinopa mutumbi une kutarisa kwakanyanya uye kunofadza.
Nzira yekushandisa nayo Anavar yeZvitsa Zvitsva
Mishonga yose inoshanda zvakapiwa kana yakashandiswa zvakakodzera. Anavar inofanirwa kunyoreswa nemumwe chiremba uyo anonyatsoziva nezvemaitiro aanofanira kuita.
Kune munhu ari kurapwa, huwandu hwemadhora hunenge huri ne 5 kusvika 10mg. Izvi zvinogona kutarisirwa kusvika kune huwandu hwe20mg zvichienderana nekuoma kwemhosva. Ikutungamirirwa kwekutanga kweAnavar inofanira kutora pamusoro pe2 kusvika kumavhiki e4. Mushure mekupedzwa kwemuyero wekutanga, zvinokurudzirwa kutora nguva shomanana kupfuurira usati wapfuurira mberi nemishonga. Mitezo inotevera inofanirawo kutora nguva yakaenzana yenguva kune imwe yekutanga. Kushandisa zvinangwa zvekurapa zvinogona kupfuurira kusvikira mhinduro dzaunoda dzikaitika. Iko, zvisinei, zvinonzwisisika kutevera mazano echiremba nguva dzose.
Sezvakambotaurwa kare mishonga inoshandiswa nevarume kukurudzira mutambo. Saka, kuti zvive nemigumisiro yakaisvonaka, muyero we-30mg pazuva unokwana. Vamwe vakada kutora huwandu hwe50mg, uye ichi ichiri mukati mehutete hwakachengeteka. Kune vamwe vanofarira kushandisa maitiro makuru ekusimudzira zvikuru. Izvi zvinogona kuparadza munguva refu, uye hazvibvumirwi kunamatira kuhotera yakakwirira. Murume weAnavar mutsara anozivikanwa kuti anogara kwemavhiki masere.
Kune vakadzi, chinenge 10mg inowanzokwanisika zvisinei nokuti chinangwa chinangwa chechirwere chii. Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti vakadzi vakawanda vanobudirira migumisiro yakaisvonaka pavanenge vachiita ichi chiyero. Kune dzimwe mamiriro apo mukadzi anogona kutora 15mg, asi izvi zvinofanirwa kuitwa nekuchenjerera kukuru. Kushivirira kune mazamu ezasi kunofanira kutanga kusimbiswa. Apo muyero unokwidza 20mg pazuva, kune ngozi yakawanda yekuti mukadzi ari kukura zviratidzo zvekurima. Kufanana nevarume, chirongwa cheAnavar chinotorawo mavhiki masere.
Pane mimwe migumisiro inobatanidza nekushandiswa kwe steroid iyi yevarimi vemiti. Vamwe vanogona kuvaona vose panguva iyo kune vamwe, chete zviratidzo zvishomanana zvinotaurwa. Kuonekwa kwemigumisiro kunobva pane zvakasiyana-siyana zveunhu zvakadai semuviri wavo, maitiro ekugadzira maitiro, mamwe matambudziko ehutano aripo uye kusagadzikana kwemamiriro emunhu.
Izvi zvinotevera mamwe emigumisiro inowanikwa nevashandisi ve steroid:
Kugeza uye acne. Anavar ane simba uyerorogenic. Zvisinei, izvi hazvirevi zvachose mikana yemamwe zviratidzo zvinooneka. Kakawanda, avo vanoona zviratidzo izvi vane maitiro ekugadzirisa. Chii chinoitika ndechekuti kune kurwisa kwakasimba kwevhudzi hwemvere dzakaita nehomoni. Izvi zvinokonzera kusuruvara kwemvere. Mune dzimwe mamiriro ezvinhu, kune chiito chakanyanyisa chezvipembenene zvakasununguka, uye izvi zvinotungamirira kune chitarisiko chechiganda paganda. Kana mumhuri yako kune mumwe munhu akave nemarara, iwe unogona kunyanya kufanana kana mushure mekushandisa Anavar. Uyewo kana iwe wakanga uine mazinya panguva yekuyaruka, tarisira kugadzirisa zvakare. Vanhu vanoshungurudza zvinodhaka izvi zvinowanzosangana nemigumisiro miviri iyi.
Zvinokonzera kupera kwematete. Ichi chiitiko chinozivikanwa se testicular atrophy. Sezvo Anavar ane dzimwe uyerogenic migumisiro, kushandiswa kwayo kunoparadza testosterone. Sezvo steroid inopinda muropa, muviri unoshandura se testosterone yakawedzerwa. Somugumisiro, mawere acho anounza vashoma testosterone, uye nechinzvimbo chavo chekusiya, vanoderera.
Mhedziso iyi inonyanya kuoneka mushure mekumisa mutambo weAnavar kupfuura panguva yekushandiswa. Munhu wacho angangodaro akawana kuderedzwa kwepabonde uye kunyange kukanganiswa kwemishumo mune dzimwe nguva. Zviratidzo zvacho zvinogona kunge zvakakura kudai Anavar aishandiswa pamwe chete nemamwe mabhakitiri steroid ane maitiro e-androgenic akakwirira.
Chiropa nenyaya. Kunyange zvazvo kuwedzerwa kweAnavar kunofungidzirwa kuti kunobatsira kune avo vasingadi majekesiti, inotanga kushandiswa kwevashandi kune zvingaita nezvechiropa. Chiropa chinotarisirwa kubvisa kudya kwekudya kusati kwasvika muropa. Nokudaro, kushandiswa kwaAnavar iyo inonzi hepatotoxic kunogona kukonzera zvinetso zvakakomba pachiropa chako. Migumisiro inogona kuva yakaipisisa kupfuura iyo yejojwa anabolic steroids sezvo iyo yekupedzisira isingasviki nhengo. Saka zvinokurudzirwa kuchengetedza mishonga kana iwe une dambudziko reropa kuitira kudzivirira kukwira kwaro kune nyika isingadzorwiki.
Madzimai, kushandisa Anavar kunotungamirira kukurudzirwa kwezviratidzo zvehupenyu zvakadai sekuwedzera kwe clitoris, kukura kwechiso chepiso uye kuwedzera kwezwi. Itero steroid inobatsirawo kuti nguva dzisingatauri kumwedzi kune vakadzi.
Kufunganya. Vashandi veAnavar dzimwe nguva vanotanga kunzwa vachinetseka uye dzimwe nguva vanotungamirira kuhope.
How About Anavar Reviews?
Anavar haagoni kunzi seanbolic steroid ine simba zvikuru. Nzira yakanakisisa yokutaura nayo ndiyo steroid inokosha zvikuru inobvumira vashandi kuti vabudirire zvavanoda kunze kwekushungurudza zvakawanda. Iyo mishonga inobvumirwa nemuviri, kusiyana nemamwe steroid ayo akave achizivikanwa kuti anokonzera kukanganisa kunoshandiswa kumushandisi. Izvo zvinogona, saka, zvinofungidzirwa se steroid yakanakisisa muvanabolic.
Chinokosha chekuzadzisa zvidikanwi zvaunoda zvishoma nezvishoma ndeyekuita kuti iwe ukashandise zvakakodzera pasina kushandisa zvisina kunaka. Kune vakawanda vanogadzira muviri, apo steroid yavanabolic inotaurwa, chii chinopinda mupfungwa dzavo kuputika kukuru. Hazvizivikanwi kwavari ndechokuti mushure mekunge vavhara Anavar, shanduko dzimwe nguva dzisingaratidziki dzinogona kuitika. Anavar hapana mubvunzo chisarudzo chakanaka chemuumbi wehuni anoda kutsva mafuta uye kukudziridza mishonga yakaoma iyo inomubvumira kuti awedzere kuedza kudzidzira. Mumwe haafaniri kutya nekuedza steroid iyi, kunyanya kuvakadzi ndiyo inonyanya kushandiswa kana yakashandiswa zvakanaka.
Kana iwe uchida kuva nesteroid iyi nzvimbo yakanakisisa yekuwana iyo iri muIndaneti mapurisa. Kune vatengesi vazhinji vekutengesa kubva kune waunogona kutenga Anavar. Zvisinei, iwe unofanirwa kuchenjerera kuti vazhinji vevatengesi pano vanogona kuva vasina kunaka. Izvi hazvirevi kuti unogona kuwana vashomanana vechokwadi. Sezvaunoronga tenga Anavar paIndaneti, uye chenjerera kuti hazvibvumirwi nehurumende yeUnited States iyo yakaramba ichisimudzira kuti mishonga inofanira kurongerwa. Saka, musati maenda kunotenga kubva paIndaneti Anavar supplier kana Anavar muumbi, kuwana chiremba.
Pachine chirevo, Anavar inhengo ye molecule inonziwo Oxandrolone. Iyo ine Relative molecular mass ye306.4442. Iko molecule inozivikanwa kuti irambe iri mumhando yayo yepakutanga kunyange mushure mokunge ichisvika uye haisi iyo inhizha inonhuhwirira kunyange mushure mekuputsa pasi. Nokuda kwechikonzero ichi, hapana molecule yemvura inoumbwa. Pakave nevakawanda vanogadzirisa zvinetso zvechirwere. Kunyange zvakadaro, kutanga kwekugadzira kwakaitwa naGD Searle & Co. Muvarume, chiyero chakakodzera chiri muhuwandu hwe20 kusvika 100mgs pazuva. Madzimai, 3 kune 20mgs zvakakwana kupa zvibereko zvakanaka. Chirwere ichi chinoshanda kwehafu yezuva uye chinoramba chiri muropa mumvura kunyange mavhiki matatu mushure mekushandiswa.
Bună ziua cât anodhura anavar. Puteți să-mi trimiteți un email cu toate datele desre desuri?
Hola es mi primera ves q tomare anavar mi pregunta es a que ora debo tomármelo ya q mi entrenamiento es las 20 horas y dura hora treinta minutos podrían decirme aq ora es recomendable tomarlo
Здравейте изчетох всичко, но така и не намерих решението на моя проблем.Та той е пия стромба и анавар .Препаратите са към края си .Имам купен кломид и се чудя кога да почна да го пия.Много хора ми казаха че двата препарата не са ча ((((((((
Ini ndiri 53 ini ndakave nekenza yecancer yegland yangu yakabviswa. Ini ndawana 65 lbs mugore. Ndiri kuda kutenga chaiyo dhiza var. Zvicharamba zvichishanda here sezvo ndisina gomarara rechiropa? Chigadzirwa chako ndicho here chaicho chigaro?
Hola, mi duda es máximo se puede tomar 8 semanas 30 mg lo recomendable, se puede alargar más ?? O es dañino y desués del ciclo cuanto tiempo se puede descansar para volver a usarlo? Con faes atléticos
Tine urombo, isu tinongopa Anavar raw powder, hapana zvakagadzirwa
Mhoro ! ini ndine chido chokutenga mahwendefa aAnavar, ndiri kutsvaga kubhadharwa neVisa semaripo. Unogona here kugovera mapiritsi e10mg?
Sawa, thanks nokuda kwekufadza kwako, pane mamwe mashoko, tapota tumira email yedu yekutengesa: [Email akadzivirira]
Ndingaita sei kuti ndiite chirongwa? Iwe unotora sei kana kushandisa iyo poda yakasvibirira?
Saiti Tyler, Isu tinongopedza kupa Anavar raw powder, unoda here zvakare?
hey ini ndiri kufarira kutenga Anavar mabheti iwe unogona kundipa tsanangudzo yemutengo, dheji, uye tab yakawanda, uyewo zvingatora nguva yakareba sei kutumira
Zvakanaka, ini ndichakukurukura ne email.
Pane munhu anoziva sei ndingatenga Anavar?
Ini ndinonyora bhurocha uye ndinonyatsokoshesa ruzivo rwako. Nyaya yako yakanyatsoita kuti ndifarire. Ini ndichatora chinyorwa chebhuku rako uye ramba uchiongorora zvemashoko matsva pamusoro kamwe kamwe pavhiki. Ndakasarudza kuti ndiwane Zvokudya zvakare. viagra pasina chiremba chiremba
Ndinokutendai zvakawanda nokuda kwekugovera izvi nevanhu vose vanoziva kuti chii chauri kutaura pamusoro! Bookmarked. Ndapota onaiwo shandisai webhusaiti yangu =). Isu tinogona kunge tine humwe humwe humwe hutano hwakarongeka pakati pedu huri 100mg
Mashoko anobatsira. Lucky ini ndakawana webhusaiti yako zvisina njodzi, uye ini ndakashamiswa nei chiitiko ichi chisina kuitika kare! Ndakaiisa mabhuku. buy generic viagra
Hi pane mumwe nomumwe, ndiyo ndiyo yokutanga kubhadhara kushanyira nokukurumidza panzvimbo ino, uye chinyorwa chaicho chiri chibereko chakanaka kwandiri, ramba uchiisa zvinyorwa izvi.
Inoshamisa! Yaro ndima inotyisa, ndine ruzivo rwakajeka kubva kune iyi ndima. viagra pasina chiremba chiremba